Khetha i-footrest enhle bese uthola induduzo | Bezzia
UMaria vazquez | 19/07/2021 20:00 | Ifenisha
I-footrest iyisiqephu esingasetshenziswanga, kepha kunikela enhlalakahleni yethu, ukuze siduduzeke. Labo bethu abasebenza emakhaya bayazisebenzisa ukulungisa ukuma kwethu ngenkathi sisebenza kwikhompyutha. Kepha ngeke kube yilezi zingqimba zezinyawo esizokhuluma ngazo namhlanje, kepha lezo ezisisiza ukuthi siphumule imilenze yethu lapho siphumule egumbini lethu lokulala noma egumbini lokuphumula.
Izitezi zezinyawo ziba a umngane omkhulu ngezikhathi zokuphumula. Uma zisetshenziswe kahle, zisisiza ekuphumuleni imilenze yethu futhi zithuthukise ukusakazwa kwethu. Kubalulekile, kepha, ukukhetha okukodwa okunobude obufanele nokungasheleli ukugwema izinkinga
Uma ngingakaze ngisebenzise i-footrest, kungani manje? Kungenzeka uyazibuza. Kunabantu i-footrest engaba yinzuzo kubo; abantu abahlukumezekile, banemithambo ye-varicose noma izinkinga zokujikeleza kwegazi. Kepha awudingi izaba zokuzifuna nikeza ukuphumula emaphethelweni. Ubani ongathandi ukwelula imilenze isikhashana ...
Uyayijabulela ifilimu kumabonakude?
Uyayifunda incwadi oyithandayo?
Noma uhlala phansi uphumule imizuzu eyi-10 lapho ufika ekhaya?
1 Ungayikhetha kanjani i-footrest
Ungayikhetha kanjani i-footrest
Ama-footrests ngeke akusize ukhulule izinyawo ezikhathele uma ungahlangabezani nezimo eziningi. Okubaluleke kakhulu, ngaphandle kokungabaza, unakekele ubude bakho ukuze singadingi ukwakha ukuma kwemilenze. Akufanele neze ibe yinde kunosofa, angalokothi!
Kumele futhi sifune i- ukusekelwa okuhlanganisiwe kahle noma okuthambile. Okubaluleke kakhulu ukujabulela lokhu kugwedlwa lapho kudlala khona idolo lethu nokusekelwa kwezithende zethu. Ngaphezu kwalokho, uma i-footrest inokuthambekela okuthile, njengemodeli ye-Omtänksam nePoang evela e-Ikea, kuzosisiza ukukhuthaza ukusakazwa kwegazi.
Ukuhlanganisa usofa ne-footrest kuletha ukuzithiba nobuhle egumbini lethu lokuphumula. Zombili lezi zimfanelo esingazithuthukisa ngokukhetha iqoqo losofa ne-footrest ngemigqa ehlanzekile nemibala ethambile ephendula enye yezindlela zokuhlobisa zamanje: isitayela saseScandinavia.
Ngakolunye uhlangothi, uma sifuna ukugqamisa ukunganaki kanye / noma nobumnandi besikhala, khetha izingcezu eziqhathanisa ngokuklanywa kwazo kanye / noma umbala kungasisiza ukuthi sikuthole. Lokhu kuvame ukusinika ukwesaba okuthe xaxa, kepha ngezinye izinkinobho singafinyelela isethi elinganisiwe:
Khetha usofa ngamathoni angathathi hlangothi ne-footrest enemibala ukuze unikeze ukuvelela kokugcina.
Khetha i-footrest engathathi hlangothi bese uyenza ivelele ngokwakhiwa kwayo noma ukuthungwa kwayo.
Singathola zombili izihlalo ezinyaweni nokukhukhumeza emakethe okungasiza ngokulinganayo, ezintweni ezihlukile. Okudume kakhulu yilawo amamodeli akudala anephedi enamakhava enziwe ngaphakathi indwangu, isikhumba noma isikhumba sokulingisa. Kukule nhlobo ye-footrest lapho sithola khona, imvamisa, leyo miklamo ye-ergonomic kanye / noma ethambekele enikela kakhulu ekunethezekeni kwayo.
Ngaphezu kwalokho, kuya ngokuya kujwayelekile ukuthola ama-poufs noma ama-fufs endwangu, i-crochet noma i-raffia ezindaweni zokuphumula ezinenhloso ephindwe kathathu: ukunika imilenze yethu ukuphumula, ukuhlinzeka isihlalo esisodwa ngaphezulu kubavakashi bethu nokuba itafula elisizayo ukushiya umagazini esiwufundayo noma isiphuzo esilungiselela ukuba naso. Ukuze kufezeke zonke izinhloso ezintathu, isikhwama kufanele sakhiwe, okuthi ngesikhathi seqiniso sonakalise amandla aso njengendawo yokuhamba ngezinyawo.
Okuqukethwe ngaphezu kokuthonya ubuhle bayo nokunethezeka nakho kunomthelela ekusebenzeni kwalezi zingqimba zezinyawo. Futhi ukuthi ukuzigcina njengosuku lokuqala, ezinye zizodinga ukunakekelwa okwedlula ezinye. Kanjalo ne lula yokuhlanza kuzofana ekwakhiweni kwe-rattan njengoba kunjalo ngendwangu eyodwa.
Ngaphambi kokukhetha i-footrest ngakho-ke kuyalulekwa zibuze uchungechunge lwemibuzo ukuthola ukukhetha kwethu kahle. Ubuza ukuthi kanjani: Ngizoyibeka kuphi indawo yezinyawo? Ubani ozoyisebenzisa? Izosetshenziselwa ini? Ngabe ngiyayidinga ukufeza imisebenzi engaphezu kweyodwa? Ingabe kubalulekile kimi ukuthi ukugcinwa nokuhlanzwa kwayo kulula? Phendula bonke abazosiza ekutshaleni ngokunembe kakhudlwana imali ekuthengeni i-footrest.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Ifenisha » Khetha i-footrest enhle bese uthola induduzo